नेकपाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दाउमा प्रचण्ड र माधव, वामदेवले थाले गृहकार्य ! - नेकपाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दाउमा प्रचण्ड र माधव, वामदेवले थाले गृहकार्य !
२०७५, २० चैत्र, 07:19:38 AM
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’भित्र अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच नयाँ गठबन्धन बनेको छ ।
अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रचण्ड र नेता नेपालले नयाँ मोर्चाबन्दी सुरु गरेको नेकपानिकट उच्च स्रोतले जनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७६/७७ को बजेट ल्याउन दिने र त्यसपछि उनलाई हटाउनेगरि प्रचण्ड–नेपालले मोर्चाबन्दी कसेको र त्यहीअनुरुप छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । जेठ १५ पछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उनीहरुको दाउ छ । उक्त मिशनमा नेकपाकै अर्का प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम खटिएका छन् ।
ओलीलाई नेतृत्वबाट जसरीपनि विस्थापित गर्नुपर्ने निश्कर्षमा दुवै नेता पुगेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए माधव नेपाल अध्यक्ष बन्ने यदि त्यसो हुन नसके माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डलाई पार्टी नेतृत्वको जिम्मा दिनेगरि ‘वान म्यान, वान पोष्ट’ को अवधारणमा जाने उनीहरुको आन्तरिक योजना छ ।
ओलीविरुद्धको नयाँ गठबन्धन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी बामदेवले लिएका छन् । सुरुवातदेखि नै वामदेव ओलीसँग रुष्ट छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ६ महिनाभित्र सम्मेलन, एक वर्षभित्र महाधिवेशन !